‘हिन्दु हुँ’ भनेर गौरीको परिवारलाई ढाँटेका शाहरुखले जब विवाहको रिसेप्सनमा गौरीको परिवारकै अगाडी भने, ‘ल छिटो बुर्का लगाउ अनि नमाज पढौं’ – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख १८, २०७८ समय: १९:४५:११
एजेन्सी । शाहरुख खान र गौरी खान बलिउडका चर्चित जोडी हुन् । जहाँ शाहरुख एक तर्फ एक सुपरस्टार हुन् भने गौरी देशको एक ठूलो आन्तरिक र फेशन डिजाइनर हुन् । दुवै जना २९ वर्ष देखि संगै छन् । बलिउडमा यो जोडिको निकै चर्चा हुने गर्छ । सबैलाई थाहा छ गौरी एक पंजाबी परिवारबाट आएका हुन् र शाहरुख एक मुस्लिम परिवारबाट आएका हुन्।
शाहरुख खान र गौरी खानले विवाह गरेका थिए। शाहरुख र गौरीले एक अर्कासँग मिल्न धेरै संघर्ष गर्नु परेको थियो। शाहरुखले गौरीका बाबुआमालाई प्रभावित पार्न पाँच बर्षसम्म हिन्दू भएको नाटक गरे र दुवैले अन्ततः अक्टोबर २५ , १९९१ मा विवाह गरे।
यस सम्बन्धमा, एक उनौठो कुरा छ जसका कारण गौरीको परिवार चकित भए। शाहरुख खानले गौरी छिब्बरको परिवारका सदस्यहरूसँग विवाहको रिसेप्शनमा एउटा नाटक गरे । जुन नाटकका कारण गौरीका परिवार छक्क परे । यो कुरा शाहरुखले फरीदा जलालसंग गरेको अन्तर्वार्तामा खुलासा गरेका छन् ।
शाहरुखले अन्तरवार्तामा भनेका छन्, म उनको पूरै परिवारलाई सम्मान गर्छु । हाम्रो विवाहको रिसेप्शनमा वृद्धवृद्धा पनि उपस्थित थिए । जसले परम्परागत संस्कार प्रति निकै प्रेम गर्छन । म उनीहरू सबैलाई सम्मान गर्दछु ।
त्यसबेला सबैजना त्यहाँ उपस्थित थिए । म त्यहाँ १.१५ मा पुगे । मैले उसको परिवारका मानिसहरु आपसमा कुरा गरिरहेको छु सुने । उनीहरुले भनिरहेका थिए, शाहरुख मुसलमान केटा हुन्, के गौरीले आफ्नो नाम परिवर्तन गर्नेछन् ? उनी मुस्लिम बन्नेछन् ?
शाहरुखले भने, म सबैको कुरा सुन्दै थिए। मैले जवाफमा भनेँ, ओके गौरी, बुर्का लगाऊ र अब हामी नमाज पढ्छौं। उनीहरू मैले यस्तो भन्दा छक्क परे । कसरी शाहरुखले यति छिटै गौरीको धर्म परिवर्तन गरिदिए ? मैले उनीहरुलाई भनें मब गौरी संधै बुर्का लगाउने छ, यो घरबाट बाहिर पनि आउँदैन र हामी गौरीको नाम आयशा राख्दछौं । यद्यपि शाहरुखले गौरीको परिवारसँग ठट्टा गरेका थिए ।